राजनीति फुर्सदको व्यापार हैन – Janaubhar
राजनीति फुर्सदको व्यापार हैन
प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर १४, २०७४ | 301 Views ||
प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार
वाम गठबन्धन, क्षेत्र नं. १ (१) दाङ
चुनाव प्रचार कसरी अघि बढेको छ ?
चुनावी प्रचार व्यापक रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । जनभेटघाटको क्रमलाई तिव्र पारेका छौं । लगभग एक चरणअन्तर्गत सबै गाउँ टोलमा पुगेर मतदातासँग भलाकुसारी गरेका छौं । मतदातालाई कुनै विशेष स्थानमा बोलाएर २÷४ घण्टा भाषण सुनाएर फर्काउने परिपाटीका विपरित उहाँहरुको घर आँगनमै पुगेर अन्तक्र्रियात्मक छलफल र प्रचार अभियान चलाएका छौं । बिस्तारै अब केही स्थानमा जनसभाहरु गरेर हाम्रा कुरा मतदातासमक्ष पु¥याउने तयारीमा छौं ।
जनता कत्तिको उत्साहित भएको पाउनुभएको छ ?
जनता निक्कै उत्साहित हुनुहुन्छ । यसमा खासगरी दुईवटा ऐतिहासिक कारण छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौं । नेपालमा पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।
अर्कोतर्फ नेपालको राजनैतिक इतिहासमा दुईवटा ठुला बामपन्थी शक्तिहरुको गठबन्धनले पनि जनतामा उत्साह भरेको छ । बहुमत जनसंख्या कम्युनिष्ट हुँदाहुँदै पनि वर्षौंदेखि जनताले उत्पीडन भोग्दै आए । अब त्यो उत्पीडनको इतिहास क्रमभङ्ग हुने चरणमा छ । र त्यो इतिहास भत्काउने जिम्मेवारी स्वाभाविकै रुपमा जनताको हातमा नै छ । यसकारण पनि जनता उत्साहित नै देख्छु । उहाँहरुसँग भेटघाट गर्दा दुई कम्युनिष्ट मिलेर भोट माग्न आएकोमा खुसी प्रकट गर्नुभएको छ भने यो एकता चुनावसम्म नभएर पार्टी एकताको चरणसम्म पु¥याउन सुझाव दिइरहनुभएको छ । मलाई लाग्छ– यिनै शुभकामना तथा सुझाव पनि जनतामा देखिएको उत्साहका परिणाम हुन ।
तपाईका चुनावी एजेण्डा के–के छन् ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त दुई ठुला पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भएको छ । यो पनि एक किसिमले जनतामाझ लगिएको एजेण्डा नै हो । दुई कम्युनिष्टबीचको एकताप्रति उहाँले आफ्नो कस्तो जनमत देखाउनुहुन्छ ?
दोस्रो कुरा हामीले स्थायी सरकारमार्फत् विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने घोषणापत्र नै जारी गरेका छौं । नौ–नौ महिनामा उलटपुलट भइरहने सरकारका कारण विकास र समृद्धिको यात्रा सिधा गतिमा अगाडि बढ्न सकेन । विगतका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएका कारण यसो हुन गएको हो । तर अबको निर्र्वाचनमार्फत् हामी २/४ वर्ष मात्र हैन केही दशक स्थायी र त्यसमा पनि बामपन्थी सरकार नै चलाउनेछौं । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
निर्वाचन जितिसकेपछि बस्ने पहिलो प्रदेश सभाबाट नै दाङलाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा गरिनेछ । त्यसैगरी मैले उम्मेदवारी दिएको देउखुरी क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेको तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको क्षेत्र हो । जस्तै, यहाँको माटो एकदमै उर्वर छ । त्यसमा आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत् हामी उत्पादकत्व बढाएर घरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछौं ।
भारतसँग जोडिएका पूरै २२ वटा नाकामा प्रत्यक्ष राजधानीसम्म पुग्न सकिने गरी सडक सञ्जाल जोडिनेछ । सडकले सबै क्षेत्र छुनेबित्तिकै स्वाभाविक रुपमा त्यसले विकासको चहलपहल बढाउने छ । कोइलाबास भन्सारलाई सुचारु गराएर पहिलेको जस्तै मुख्य वैदेशिक व्यापार केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
देउखुरी क्षेत्रमा ठुलो जनसंख्या भए पनि उहाँले आधिकारिक रुपमा आफ्नो जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन । यसर्थ सबै सुकुम्बासी भूमिहीन किसानलाई लालपुर्जा प्रदान गरिनेछ ।
यस्तै २ वर्ष भित्र भू–उपयोग नीति लागु गरेर कृषियोग्य, व्यापार योग्य, उद्योग योग्य, बसोबास योग्य जमिन छुटयाएर काम अगाडि बढाउनेछौं । मौलिक अधिकारका रुपमा रहेका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, निःशुल्क रुपमा सबैको पँहुचमा पु¥याउनेछौं ।
राप्ती नदीलाई २ वर्षभित्रमा दुबैतिर तटबन्धन गरेर जमिनको कटान रोक्नेछौं । हाल जसरी राप्ती नदी अभिशापका रुपमा लिइएको यसलाई वरदान साबित गर्नेछौं । सामाजिक सुरक्षा भत्त करिब ५ हजार पु¥याउनेछौं ।
देउखुरी क्षेत्रमा विविधतापूर्ण बसोबास रहेको छ । खासगरी चौधरी र यादव समुदायको बसोबास रहेकोले उहाँहरुको संस्कृतिको जगेर्ना गर्न विशेष अभियानहरु चलाउनेछौं । प्रदेशस्तरमा त एउटा कलासाहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउनेछौं भने जनताले तिरेको करलाई व्यवस्थित तथा पूर्ण रुपमा जनतामै फर्किर्ने संरचनागत प्रणालीको विकास गर्नेछौं । यस्तै सेवा प्रवाहलाई पनि पारदर्शी, असल आचरण र जवाफदेहिताको ग्यारेण्टी गरिनेछ भने गरिब, असहाय, तथा पिछडिएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ । यी र यस्तै धेरै यस्ता कुरा छन् जसलाई आश्वासनका रुपमा मात्र नभई साँच्चिकै हामी कार्यान्वयन गरेर नै देखाउनेछौं । विकास र समृद्धिका लागि जनतलाई धनी बनाउने कुरा नै मुख्य हो ।
उसो भए तपाईका चुनाव जित्ने आधार के के छन् ?
हेर्नुस, म राजनीतिमा आएको २/४ वर्ष मात्र भएको छैन । र आउँदा दुई चार वर्षका लागि मात्र मैले राजनीति गर्ने पनि हैन । लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा म राजनीतिमा होमिएँ । खासगरी आफैले भोगेको र देखेको उत्पीडनको परिणामस्वरुप १६÷१७ वर्षको छँदा नै म राजनीतिमा होमिएको थिएँ ।
लाग्छ– परिवर्तनप्रति कति पनि विचलित नभई म निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छु । एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएर मैले परिवर्तनका लागि पु¥याएको योगदान स्वरुप नै हुनुपर्छ जनयुद्धकालभरि पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र शान्ति प्रक्रियापछि अन्तरिम संसदको विधायक र २०६४ सालको निर्वाचनबाट संविधानसभा सदस्य नै भएँ । जनताबाट निरन्तर अनुमोदित हुँदै आएको छु । मलाई लाग्छ– मैले निर्वाचन जित्ने यो एउटा प्रमुख आधार हो ।
अर्कोतर्फ, मैले जुन–जुन भूमिका प्राप्त गरेँ, त्यसलाई पूर्ण इमान्दारीका साथ निर्वाह गरेको छु । म निर्वाचन जित्नुअघि जस्तो थिएँ अहिले पनि उस्तै सामान्य अवस्थामा नै छु । जनताको भावना विपरितको सम्झौता र पदको दुरुपयोग मैले कहिल्यै गरिनँ र गर्ने पनि छैन । राजनीति फुर्सदमा समय बिताउन आउने पेशा हैन । यसका लागि निरन्तर त्याग र समर्पण चाहिन्छ ।
यस्तै राजनीतिमा लामो समय बिताएका कारण म सँग कामको अनुभव पनि छ । जसलाई म अबको विकास र समृद्धिको यात्रामा व्यवहारमा उतार्ने छु । संविधानसभा सदस्य छँदा राज्य पुर्नसंरचना समितिमा काम गरें । हाल जुन तहको निर्वाचन भइरहेको छ, यसको ऐन निर्माण गर्ने समिति हो त्यो । यसर्थ संघीय र प्रादेशिक संरचनाको कार्यान्वयनका लागि अनुभव र त्यसमा आवश्यक पर्ने ज्ञान म सँग छ ।
यो सँगै देउखुरी क्षेत्रको विकासको आधार तयार पार्ने काम पनि मैले नै गरेको हुँ । कालाकाँटे–सिक्टा सडकखण्डलाई पिच, जखेरा र जंगलकुटीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास, यस्तै राप्तीमा तटबन्धन निर्माणको कार्य मेरै पहलमा भएका हुन् ।
यस्तै सिमा क्षेत्रका विकासका लागि ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ पनि मेरै पहलमा सञ्चालनमा आएको हो । यस्ता धेरै कुरा छन्, जुन कुराले मतदाताले मलाई जिताउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
अबको चुनाव नेपालका लागि एउटा सामान्य चुनाव मात्र नभई विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । निर्वाचन हुने तर जनताले कहिल्यै परिवर्तनको अनुभुति गर्न नपाउने परिपार्टीको अन्त्य गर्ने वा नगर्ने ? निर्णय गर्ने बेला हो । यो कुन पार्टी र नेतालाई निर्वाचन जिताउने र कसलाई हराउने भनेर गरिन लागेको चुनाव मात्र हैन । स्थायी सरकारमार्फत् मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने समय भएकाले मतदान गर्दा गम्भीर भइदिन म आम जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु ।
मतदाताले सही ठाँउमा मतको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनमा एक भोटले पनि ठुलो अर्थ राख्छ । स्थायी सरकारका लागि बामपन्थीको नेतृत्वमा दुई तिहाई अत्यावश्यक छ । यसका लागि दाङबाट बाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका सबैलाई भोट गरेर जिताउन म आम मतदातालाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यस्तै दाङको विकास लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको ‘दाङ प्रादेशिक राजधानी’ निर्माणका लागि पनि हाम्रा सबै उम्मेदवारले चुनाव जित्नु अत्यावश्यक छ । म फलानो पार्टीको अर्को पार्टीलाई भोट किन दिउँ ? जस्ता पुराना आग्रह पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर यसपटक स्थायी सरकारका लागि बामपन्थी उम्मेदवारलाई भोट दिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : भुपेन
Prevके पाए नि पाख्रिन दाइले ?
Nextएकाएक उत्सवमय बन्यो घोराही (फोटो फिचर)